Sida loo kala garan karo swifts, liqida iyo diyaaradaha - Ikkaro
Inicio >> Dabeecadda >> Sida loo kala garan karo swifts, liqida iyo diyaaradaha
Waxaan ku kala duwanaan karnaa 3 qaab oo kala duwan.
Buul buu ku dhaartay
Adiga oo heesaya
Muuqaal ahaan (silhouette iyo duulimaad)
Halkan waxaan ku kala saari karnay laba arrimood oo kale: qaab-dhismeedka shimbirta iyo qaabka qiimaha.
Morphology iyo silhouette
Markaad aragto sawirada waxaad moodaa inay tahay mid aad ufudud, laakiin markay duulayaan ma ahan wax fudud, gaar ahaan inta udhaxeysa diyaaradaha iyo liqida. Swifts waa fududahay in la garto.
Waa kan ugu weyn illaa iyo hadda wuxuu leeyahay baal baalkiisu yahay 40 - 44cm
waa wada mugdi (waxaan ka hadlaynaa iibka guud)
wuxuu leeyahay baalal qaabkeedu u eg yahay
kuus cad cad
dabada ma leh baalal fargeeto dheer
baalal dheer oo fiiqan
iyo gaar ahaan dabada fargeetada leh leyrarka dhererka iyo silig-khafiifka ah
Waxaan ku kala saari karnaa 3da shimbirood sida ay u duulayaan. Laakiin dhammaan siyaabaha aan xuso waxaan u maleynayaa inay tani tahay tan ugu adag bilowga. Waa run marki aan si fiican u aqoonsanay 3da nooc. Qaabka loo duulo waxay noo ogolaaneysaa inaan kala saarno Diyaaradaha iyo liqida, swifts kuma rido isla boorsada maxaa yeelay saddexda waa kuwa ugu fudud ee lagu kala duwanaan karo. Waxaan had iyo jeer shaki ka qabnaa inta u dhexeysa haddii aan aragnay diyaarad ama liqitaan.
Burburka frantic, baalalka talantaalli ah ka dibna ku duula xawaare sare. Daawashada duulida degdega ah waxay la mid tahay daawashada duulista qallalka xawaaraha ku socda.
Diyaarado dhaadheer oo baalal toosan wata oo xawaare gaabis ahna ku leh gooladaha
Duulimaad deg deg ah oo xoog leh oo wata garabka garabka laga jaro, oo leh duulal aad uga gaaban diyaaradda. Waxay u egtahay in hawada lagu boodboodo, oo duulimaad bartanka looga duulayo
Swifts waxay buul ka sameystaan ​​godadka derbiyada, derbiyada, dhagaxyada, iwm. Marka haddii aad aragto mid ka mid ah qaabab dhoobo ah oo ka hooseeya balakoonka waad hubsan kartaa inaysan ahayn mid deg deg ah.
Wax liqiddu waxay buulkooda ka samaysaa dhoobo, waxaa lagu gartaa qaabka koobka, way ka furan tahay xagga sare
Halka diyaaraduhu ay ka sameystaan ​​buul dhoob ah oo u eg oval leh hal god oo laga soo galo ama laga baxo
Marar badan ma aragno shimbirahan oo dhaafaya laakiin waxaan maqalnaa iyagoo hawada ku raaxeysanaya. Mid waliba wuxuu leeyahay heesta astaamaha u gaar ah oo aan ku kala garan karno nooca ay tahay.
Midda ugu caansan waa ta swifts, oo waliba kolba koox ku duula xawaare buuxana waa dhawaq aad u muuqda.
Raucous, monotonous, qaylo dhaan
Carlos W., XC466673. Laga heli karo www.xeno-canto.org/466673.
Farxad iyo dhexgalid soosaarid a vi»Taasi waxay ku celcelinaysaa 2 jeer. Waxay ku dhawaaqayaan joogitaanka bisadaha a siflitt iyo haadda ugaadha leh kala-bax
Karl-Birger Strann, XC443771. Laga heli karo www.xeno-canto.org/443771.
Heesta Diyaaradda Wadajirka ah
Jens Kirkeby, XC381988. Laga heli karo www.xeno-canto.org/381988.
Kala duwanaanshaha kale
Kala duwanaanshaha kale ee shimbirahaas oo sida caadiga ah aan ku wada dhigno isku koox. Waxaad arki doontaa in swifts-ka ay ka samaysan yihiin dhejis kale
Xiisaha xiisaha leh ee indhahayga qabanaya ayaa ah in saddexda nooc ay u hayaamaan meelo kala duwan oo dherer ah.
Swifts at 2000 aniga sare
Taariikh Isbaanish ah Arturo Pérez-Reverte
Bullaacad loogu talagalay kaabsoosha kafee
Categories Dabeecadda Tigidhka tigidhka
1 Muuqaal ahaan (silhouette iyo duulimaad)
1.1 Morphology iyo silhouette
1.2 Jidka duulista
2 Buul buu ku dhaartay
3 Adiga oo heesaya
4 Kala duwanaanshaha kale